Hypnotism | Ọkọwa Okwu Ahụike
Hypnosis + Iwu Ntinye
Bright Amponsah Nwere ike 15, 2020
Onu echiche nke batara n’uche maka iwere ihe omumu ihe omumu n’iru, na-eme ka ndi n’onu n’onu ike na- abawanye nye onwe m, na-enyem ohere inye ihe ndi ozo n’efu bu uche ojoo! Echiche nkịtị gbasara echiche na-aga n'ihu n'isi m! Ọmụmụ ihe onwe ha bụ aka ọrụ na aka ha n'iji ọtụtụ ọhụụ na-eweta usoro iji hụ na nnọkọ dị egwu ma na-atọ ụtọ. E jiri nlezianya dozie nnọkọ nke ọ bụla, na-etinye ntụnye maka aro ndị a iji bulie ogo nke mmiri n'ime uche dị n'okpuru. "
Ibu Ibu Taa Na Mmetụta Ọkụ Egwuregwu Gastric Band
Bright Amponsah Nwere ike 13, 2020
Ọ bụ eziokwu. I KWES loseR lose ifelata na-enweghị agụụ! Gastric Band Hypnosis adịghị ka ịta nri - ọ bụ na iche. Aga m agwa gị banyere ya n’otu ntabi anya. Ihe a ọ maara, mgbe ị na-achọ ifelata ... star na-ejide onwe gị agụụ maka ihe ka ọtụtụ ụbọchị, agụụ na-agụ gị, ike gwụkwara gị. Ka ị na-agọnarị onwe gị, ka ị na-echekwu banyere nri. Gaghị enwe ike itinye uche na nkụda mmụọ. You na-ahụ nri gburugburu, ọ ga - abụ ọgụ mgbe niile ịgọnahụ onwe gị.
Njikere Ime Anwansi
Master Isi Iche
Na-eduga Mentalism & Magic Trick Training! Kpoo nzuzo nke Top Mentalists & ndi anwansi. Gbakwunyere… Otu esi Eme Ọhụụ, Mmegharị Anwansi Tv Dị ka David Blaine, Criss Angel & Derren Brown. Ọzọkwa Chọpụta Hypnosis Hacks, Kaadị Card, aghụghọ Agụ & More! Chegodi ihe ịtụnanya na-eju gị anya… ndị enyi tọgbọrọ eju… na njakịrị ala… ”Gị onwe Gị Nwere Ike Iche Echiche Mmetụta & Anwansi Ime Anwansi IM KWES AnyoneR Anyone Onye ọ bụla…” Karịrị 10,000 Mentalists & Ndị dibịa anwansi - gụnyere ndị ọkachamara, ndị dibịa anwansi, ndị na-ahụ maka uche na Vegas na ọbụna Ndị na-eme Street. Nkwupụta Mental Na-ahụ Maka Mentalism & Ihe Ime Anwansi!
Ike nke Mkparịta pgwọ Hypnosis Crash
Bright Amponsah Nwere ike 12, 2020
Hypnosis Crash - Nke a bụ ezigbo usoro nzọụkwụ nwere ike inye aka
wulite ike gị nke hypnotic mmetụta ngwa ngwa karịa ka ị chere na ọ ga-ekwe omume! Gị ọkwa nke obi ụtọ na ihe ịga nke ọma na-adabere ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe nzuzo dị mfe nke mmetụta nke omume, ị ga-enweta ụwa n’elu ụkwụ gị. Ọ bụrụ na imeghị, naanị ihe ị ga-eme bụ ịnwe nkụda mmụọ. Dị ka 95% nke ndị mmadụ na-ata ahụhụ na enweghị nsogbu na ụdị nsogbu niile.
Gịnị Kpamkpam Bụ Renegade Uche Golf?
Bright Amponsah Nwere ike 10, 2020
Hey e nwere onye na-achọ golfer… KPUKWU golfer maara na ihe na - ekewa ihe dị mma na ndị na - agụkarị bụ akụkụ nke egwuregwu. You mara nke a bụ eziokwu. , ọzụzụ d ị ịdọ aka ike, ike na ọnọdụ oyi, yana mkpebi siri ike.
Njikwa mmekọrịta Elite - Mmemme Hypnosis
Nchịkwa Elite Social
Isi gafere hypnosis na seduction gha ụgha na nzuzo iji nweta ihe ị chọrọ… Site n'aka onye ọbụla, oge ọ bụla. Nnukwu maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ịbawanye ụba, Njikwa uche, Hypnosis, Nsuso sedu ma saịtị saịtị.
Gini bu enyemaka nke anya nke ato?
Enyemaka nke atọ
Bright Amponsah Nwere ike 7, 2020
Uche abụbu ihe na-atọ m ụtọ. Kemgbe m bụ nwata, enwere m ihe na-emetụta mmụọ n'uche mmadụ yana otu o si emetụta akụkụ ndị ọzọ nke ahụ mmadụ gụnyere mkpebi, echiche, ọrụ akụkụ yana ọbụna kemịkalụ anyị.
Ihe Egosiputa Uche Egosiputa 2.0 Ntughari 5th na 12th nke March 2013
Nke a nwere ike iyi ihe ekwenyeghi, ma ọ bụ nwee njakịrị, ma bụrụ onye eziokwu n'eziokwu n'otu oge nke ndụ m enwere ike ikwenye gị .Mgbe ịchọpụtara ihe nzuzo m ga-ekpughere gị, ndụ m abụbeghị otu ihe ahụ. adị ka gị , ndu m kwenyere na ekwesịrị m
Bright Amponsah Nwere ike 6, 2020
Saịtị a adịghị ka saịtị ndị ọzọ hypnosis ndị ọzọ dị. Saịtị a ga-akuziri gị ihe dị iche… Saịtị a ga-akuziri gị Mkpesa doro anya na usoro arụmọrụ kachasị na uche njikwa tụgharịrị ndị isi narị… Ma maa ihe. Ndị mmadụ na-ekwu maka ihe kpatara ya.
Gwọ Ọrịa na Qigong - Gini Bụ?
Bright Amponsah Nwere ike 5, 2020
Onye World Hywnotherapist Steve G. Jones kere ya, Steve 'ị gwọọ Qigong' iji nyere gị aka mee ka ahụike gị dịkwuo mma. Ihe a bu odi ihe omume odi ihe ndi ozo. “Onye Ọzọ Dị Njikere Ahụhụ Ahụhụ Ahụ Nke Na-adọta Ndị Mmadụ Ikike ichebe Onwe Ha Site Ọrịa, Nchegbu na Usoro Nchịkwa Ahụ n'enweghị nsogbu Ọfụma?